Olee otú Afọ Iri na Ụma na ndị okenye na-erepịaghị Music ọdịnaya (infographic)
Na-eto eto VS okenye: Olee na-ege ntị Music (infographic)
Music ụkọ-adị kwa ụbọchị ndụ: na obibi, na ụgbọ oloko na ụgbọ elu, na ụgbọala na ụlọ ahịa, na nwa na ọnwụ, agbamakwụkwọ na agha, egwu Ụlọ Nzukọ, klọb, stadiums na orchestrates; ụzọ niile nke ndị mmadụ na-enweta ụwa ọnụ. Otú ndị mmadụ na-ege ntị music, na ndị ndị na-enwekarị music, dị ole na ole ajụjụ na ịdịgide uche anyị ugboro ugboro. Iji maa atụ ndị a niile, anyị na-kere a infographic.
The infographic ebe a na-akọwa banyere mmasị nke afọ iri na ụma na ndị okenye na music, ụdị nke ụzọ ha abụọ na-ahọrọ na-anụ n'afọ iri na ụma nke ndụ, bụ ndị na-arụ ọrụ karị na ịzụta music, bụ ndị na-agakwa ndụ music ihe na aku na uba nke music. Ọ bụ ezie na-eto eto na-emeri n'ọsọ, na ha na ndị na-enye music mgbe ha na-eto ochie. N'otu aka ahụ, na-agọzi na elu teknụzụ, ndị mmadụ nke 65+ afọ otu ọpụpụ redio. Iji mara ihe banyere oke, na-a ngwa ngwa hụperetụ na infographic nyere ebe a.
Detuo Usoro N'okpuru ebe embed infographic gị na saịtị:
Olee otú Download tubidy Music na Video on Computers na Portable Devices
Video Songs Download n'ihi na ekwentị mkpanaaka, iPhone, iOS ekwentị ma ọ bụ akporo ekwentị
Olee otú Download Videos si Crackle
Olee otú Download Hal.dll
> Resource> Download> Afọ Iri na Ụma VS okenye: Olee na-ege ntị Music (infographic)